Daawo Dekadda Muqdisho oo lagu soo kordhiyey Terminal cusub – VIDEO |
Daawo Dekadda Muqdisho oo lagu soo kordhiyey Terminal cusub – VIDEO
Muqdisho (NN) 19/06/2016
Shirkad si gaar ah loo lee yahay oo lagu magacaabo SIMATECH International ayaa meel ka baxsan dekadda Muqdisho ka hirgelisey terminal cusub oo ah nooca loo yaqaan “Dry Port” waxaana ay culeyska ka qaadi doontaa sida la sheegay Dekadda Weyn ee Muqdisho oo hadda aad mashquul u ah.
Munaasabad xariga looga jaray Terminaalka cusub ayaa ka dhacdey Dekadda Muqdisho. Waxaana xariga ka jaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu furitaankii ka jeediyey khudbad kooban oo uu uga hadlaayo Maalgashiga.
Terminalkan cusub oo ku yaalla meel ka yara baxsan dekedda ayaa loo adeegsan doonaa in la dhigo dhammaan konteenarada laga soo dejiyo Dekedda Muqdisho, halkaasina lagu marsiin doono nidaamka dejinta ee isugu jirta baarista, sugidda iyo canshuuraha badeecadaha kala duwan.
Shirkadda SIMATECH International ayaa ka diiwaan gashan dalka UK waxaana guddoomiye ka ah Mohamed Reza Maghami oo u dhashey dalka IRAN.